आकाशबाट खसेको ठ्याक्कै ६ वर्षपछि रमिला र सञ्जीव फेरि धरहराको टुप्पोमा ( भिडियो) – Dainik Samchar
April 26, 2021 246
रमिला श्रेष्ठ कुनै नौलो ठाउँमा छिन्। कहाँ छिन्, कोसँग छिन् उनलाई हेक्का छैन।
त्यही बेला घटटट, कटटट, किररर, चररर गर्दै जमिन हल्लिन थाल्छ। उनी जहाँ छिन्, त्यो ठाउँ रोटे पिङजस्तै मच्चिन थाल्छ।
उनी भाग्ने कोशिस गर्छिन्, तर जति कोशिस गर्दा पनि भाग्न सक्दिनन्।
उनलाई आफू कतै अड्केको, कतै चेपिएको, कतै भासिँदै गएको अनुभव हुन्छ।
उनी चिच्याउँदै गुहार माग्न खोज्छिन्, तर बोली फुट्दैन।
कसैले घाँटी थिचेजस्तो भएर आउँछ। सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। उनी निस्सासिन्छिन्।
त्यही बेला रमिला असिनपसिन हुँदै झसंग ब्युँझन्छिन्।
रमिलालाई प्रायः बिहानीपख यस्तै सपनाले ऐँठन पार्छ।
‘जुन बिहान म यस्तो सपना देखेर ब्युँझन्छु, त्यो दिन मलाई एकदमै डर लाग्छ,’ नयाँ धरहराको बीसौं तलाको बार्दलीमा उभिएर वरिपरि काठमाडौं हेर्दै रमिलाले भनिन्, ‘सपनामा ठूलो भूकम्प गएको हुन्छ। म भाग्न चाहन्छु, भाग्न सक्दिनँ।
मद्दत माग्न चाहन्छु, मद्दत माग्न सक्दिनँ। एक मनले यो सपना त हो नि भन्ने लाग्छ, तर मनको डर जाँदै जाँदैन। अहिले पनि मलाई भूकम्प भनेपछि एकदमै डर लाग्छ।’
सपनामा मात्र होइन, अप्रत्यासित मौसम परिवर्तन हुँदा बिपनामै यस्तै ऐँठन पर्छ रमिलालाई।
झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाँदा होस् वा अस्तिजस्तो वेगसँग हावाहुन्डरी चल्दा, आकाशमा झिलिकझिलिक बिजुली चम्किँदा होस् वा मुसलधारे पानी दर्किँदा, रमिलाको आँखाअगाडि २०७२ वैशाख १२ को त्रासदीपूर्ण क्षण नाच्न थाल्छ।
त्यस्तो बेला कतै एक्लै छिन् भने उनी कहालिन्छिन्, भन्छिन्, ‘फेरि भूकम्प आउने हो कि भनेर मलाई भित्रैदेखि डर लागेर आउँछ।’
‘कुनै घटनाले मान्छेको मनमा त्रास गडेको छ भने त्यो त्रास जति वर्ष बिते पनि मनबाट हराउँदैन रैछ है,’ बार्दलीको सिसा समातेर एकटक सहर नियाल्दै रमिलाले भनिन्।
‘म त्यो दिन सम्झिरहन्छु। आकाशबाटै खसेजस्तो भएको थियो। धरहराको बाटो हिँड्दा पनि घरिघरि त्यही क्षण याद आउँछ। कसरी बाँचे हुँला भन्ने कुरा मनमा खेलिरहन्छ। तर, जति सोचे पनि जवाफ नै पाउँदिनँ,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘पुरानो कुरा त बिर्सिजानू नि, झन् त्यत्रो डरलाग्दो घटना किन सम्झिरहनू, तर जति कोशिस गर्दा पनि बिर्सनै सकिन्न रहेछ। किन होला है?’
हुन पनि हो– मान्छे जुन घटना बिर्सन चाहन्छ, जुन घटनालाई अतीतमै पोको पारेर अगाडि बढ्न चाहन्छ, त्यही घटनाले घरिघरि अतीतको पर्खालबाट फुत्त हाम्फालेर सपनाको बाटो हुँदै वर्तमान बिथोल्न आइपुग्छ।
किन आइपुग्छ हँ?
यसको जवाफ रमिलासँग छैन, न त्यस दिन उनीसँगै धरहरा चढ्ने सञ्जीव श्रेष्ठलाई थाहा छ।
Prevआज १३ वैशाख २०७८, सोमवार : आजको राशिफल
Nextकाठमाडौमा पनि निषेधाज्ञाको निर्णय, के गर्न पाइन्छ के पाइन्न ?
कोरोनाले तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने भन्दै बजायो खतराको घण्टी
लामोसमयपछि चलचित्रमा फर्किए प्रशान्त तामाङ, सम्पदासँग जोडी बाँध्दै